Kamerona : Vehivavy Kameroney Bilaogera Vitsivitsy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Septambra 2018 6:46 GMT
Maneho ny heviny eo amin'ny aterineto amin'izay ireo vehivavy Kameroney miteny anglisy, amin'ny alalan'ny bilaoginy, na momba ny fanabeazana, ny fahasalamana, ny lamaody sy ny kolontsaina, na koa ny toe-piainan'ny vehivavy (mitondra eny amin'ny tranonkala amin'ny teny anglisy daholo ny rohy rehetra). Miandry ny ho teraka ary nanokatra bilaogy Betty’s Pregnancy Diary (Diarin'ny Betty Bevohoka) i Betty, mipetraka ao Manchester, eo Angletera. Tamin'ny herinandro faha-34, nosaintsaininy ny momba ny fiantraikan'ny krizy ara-bola ankehitriny izay mandona ny tsena manerantany.
Nanapaka hevitra aho fa miaraka amin'ity krizy izay miandry antsika ity, tahaky ny baomba eo ambonin'ny loha, tsy maintsy atsahatra ny tsy firaharahiana. Jereo, eto am-pihinanana Maltesers aho, ary ny lamaody no kiririoka mafy indrindra noho ny kiririokan'ny krizy, aty! Nanapaka hevitra ny ho tena milamina ny tenako mba hividianana ny ilaina ho an'ny zazakely. Raha tokony nandany vola fahatany, nipetraka aho ary nanao ny lisitrin'ny zavatra sy ny tetibola. Manomboka mihamahay aho amin'ny fitantanambola, afaka mifampitàna amin'ny mpitahiry ny fitombokasen'ny fanaovana fanorona.
Momba ny fitaizana zaza ihany, miresaka momba ny olana hitan'ireo raibe sy renibe izay tsy maintsy maka andraikitra tanteraka amin'ireo zafikeliny ny Mabi’s World:
Any amin'ireo vohitra sy tokantrano, nanampy mandrakariva tamin'ny fitaizana zaza ireo raibe sy renibe. Ataony an-tsitrapo izany ka vonona izy ireo ny handeha lavitra mba ho eo anilan'izy ireny. Tsy maintsy mandeha fiaramanidina ny sasany amin'ireo renibe ary mandeha any ivelany mba “hisahana fitaizàna zaza”. Fa amin'izao, anaty tokantrano maro, miova ho fipetrahana tanteraka ny tsidika vetivety mba hijery an'ilay zaza vao teraka, mba hikarakaràna an'ilay zaza rehefa miasa ireo ray aman-dreny.
Liana amin'ny fahasalama koa ito bilaogera somary vaovao ito. Namoaka torohevitra momba ny hanoherana ny tefoedra izy ary mahatsiaro ny Andron'ny mpampianatra ( ny 5 oktobra) amin'ny fanomezana voninahitra ny rainy efa nodimandry, izay ho azy dia sady profesora no ohatranà “fahaizamitarika” :
Profesora ny raiko, Ntunibu James Azefor. Profesora izay mbola fanta-daza mandraka ankehitriny ny hatsaràny. Miresaka momba azy ho toy ny olona tsara fanahy, be fanajàna, ary nanokan-tena tamin'ny asa maha-mpanabe azy. Samy nanana tantara iray hotantaraina momba azy avokoa ireo mpianany tsirairay izay hitako mba hanporofoana hoe tena nanova ny fiainan-dry zareo izy. Miresaka momba azy ho toy ny profesora tsara izay nanana fahazotoana, hevitra, fitandremana ny hafa ary ny fitiavana mampianatra nanampy azy nijery lavitra sy nanatratra ny tanjony ry zareo. Anaty fiteny psikôlôjika an'ny InterAction, afaka lazaina ho toy ny “Namela ny hafa hampiseho ny tena lanjany sy ny hanao zavatra lehibe” izy. Izany no atao hoe fahaizamitarika.
Mpanao gazety amin'ny onjam-peo sy mpanolotra fandaharana amin'ny fahitalavi-panjakana kameroney (CRTV) i Mabi azefor Fominyen. Mahaliana azy ny fianakaviana, ny fitantànana ary ny olan'ny vehivavy.
Eo amin'ny toko momba ny zon'ny vehivavy, Rosemary Ekosso , izay niverina hita indray tamin'ny septambra taorian'ny fotoana nanginany, dia tsy manaiky ny fananana vady maro ary tsy mitsitsy ny teniny rehefa maneho ny heviny momba ny fanadihadiana iray nataon'ny BBC momba ny Nizeriana iray nanana vady miisa 86.
Tsy misy fanamarinana afaka ekena momba ny fananana vady maro amin'izao vanimpotoana izao, ary fantantsika izany. Aleo ajanona ny mody miteny fa voaaro ny zon'ny vehvavy ao anatin'io toejavatra io, na dia fantatsika tsara aza fa mitady fotsiny ny hiarovana ny tsy hisian'ny fiovan-javatra iray fotsiny isika, na satria tsy voakasika isika, na satria mahazo tombony avy amin'izany isika.
Tsy mitovy hevitra aminy ny iray amin'ireo mpamakiny ary niteny an'i Rosemary:
Niteny taminao manokana ve ireo vehivavy ireo hoe mahatsiaro iharan'ny tsy rariny? Niteny ve izy ireo fa noterena? Nisafidy an'io fiainana io izy ireo ary tsy ananan ny zo hanery azy ireo hanaraka ny fomba fijerinao izay heverinao ho fanambadiana “lafatra” aminao. Fandàvana ny zon'izy ireo izany.
Eo amin'ny sehatrin'ny kolontsaina, Dulce Camer, izay milaza ny tenany ho “vehivavy Kameroney tanora miezaka ny hanatanteraka ny nofiny” no niresaka tamin'i Anrette Ngafor, tanora Kamerona mpakasary fantatry ny rehetra, eo amin'ny 32 taona, miaraka amin'ny faniriana goavana:
Ny hanana ny anaranà vokatra ahy manokana, ny orinisako ary ny toerana fakàna sary ahy manokana no tanjoko. Tokony ho vitako tsy ho ela izay satria miasa mba hanatratrarana ny nofiko aho.
Anatin'ny mahaliana an'i Menoosha, mpihira, mpamoronkira ary mpamorona akanjo ao Alemaina ihany koa ny lamaody. Ao amin'ny The Pink Post, resahany ny momba ny taovolo sy ny fanatsorana volo, izay tsy mampiseho ny hatsaran'ny vehivavy Afrikana :
Ry Rahavaviko afro ! Ito ny fanangonako sonia manokana mba HIKAJIANAREO NY VOLONAREO!! Na tsotra, na miolana, ngita, tena izy na tsia, MIANGAVY ANAREO AHO!!!! NDAO KAJIANA TSARA NY VOLONTSIKA !!!! TIAVO TAHAKY NY TENANAREO NY VOLONAREO !!!!
Manome fomba fahandro sakafo vitsivitsy avy ao Kamerona i Bamenda Babe, eo amin'ny bilaogy My African Father . Mipetraka efa an-taona maro ao Etazonia i Bamenda. Ny bilaoginy no fombany hifandraisany amin'ny fiaviny, amin'ny alalan'ny fanaovana sakafo Kameroney :
Fanamby be ny fanaovana katsaka kohki aty Etazonia. Aiza no ahitana ravinà akondro amonosana ny kohki alohan'ny ahandroana azy amin'ny entona? Ary alohan'izany – alohan'ny zava-drehetra – aiza no ahitana ny karazanà katsaka ilaina? Malemy loatra ireo hita eo amin'ny tsena aty, be ranony ary mamy loatra. Misy ravinà cocoyam vao avy notazana ve aty?